Ogaden News Agency (ONA) – Ogaysiis: Jaaliyada Somalida Ogadeniya ee Wadanka Canada Faraca Kitchener.
Ogaysiis: Jaaliyada Somalida Ogadeniya ee Wadanka Canada Faraca Kitchener.
Posted by ONA Admin	/ September 12, 2016
Waxaa la ogaysiinaya dhamaan Jaaliyada somaliyeed ee ku dhaqan magaalada Kitchener ee wadanka Canada in la qabanayo sanad-guuradii kasoo wareegtay aas aaskii Jabhada Wadaniga Ooraynta Ogadeniya (JWXO).
Xafladan ayaa lagu marti qaaday madaxda qaran iyo aqoon yahano sar sare. Hadaba waxaan loogu baaqayaa dhamaan bulsho waynta Somaliyeed ee ku dhaqan magaalada Kitchener iyo nawaaxigeeda inay kasoo qaybgalaan munaasabadan lagu maamuusayo xuska sanad-guurada 32-aad ee aas aaska JWXO.
Xafladan ayaa waxaa si wada jira u qabanaya Jaaliyada Somalida Ogadeniya ee Ontario ee Kitchener, Ottawa iyo Toranto. Xafladan ayaa waxaa marti ku ah kana soo qayb gali doona madax sare oo ka tirsan JWXO oo uu kamida yahay Gudoomiye Ku Xigeenka Hogaanka Abaabulka iyo Arimaha Jaaliyadaha Ogadeniya (HAAJ) mudane Mohamed Rashiid.
Xaflada ayaa waxaa la qaban doonaa 17 september 2016 saacadu markay tahay 5:00 pm, wixii faah faahina oo intaas dheer waxaad ka heli kartaan muuqaalkan hoose ee hamoogaanin.